Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana Hiteny sa hody fanina ?
Filankevitry ny minisitra Nesorina ny Tale Jeneralin’ny APIPA
Antenimieram-pirenena Hatsangana ny vaomiera mifandraika amin’ny HCJ
Raharaham-pirenena « Mila fiovana mahery vaika ny fomba fitantanana”
Antenimierandoholona Mitaky 7 miliara ariary hanampiana ny tetibolany
Lany nasiam-panitsiana teny anivon’ny Antenimieran-doholona ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2020.
Ao anatin`ny firenena iray ny sata repoblikanina sy ny demokrasia dia ny fifidianana no heverina fa zava-dehibe indrindra.
Ny fifidianana ihany no hany fomba ahafahan`ny vahoaka andriamanjaka mametraka ireo olona izay hitany fa mendrika hitantana ny firenena na filoham-pirenena na solombavambahoaka na ben`ny tanàna. Niaiky ny CENI izao fa nisy ny hosoka ka tena mametra-panontaniana ny fijoroan`ny fitondram-panjakana ankehitriny. Raha tsiahivina dia maro ny fanehoan-kevitra fa misy raha tsy manjary tamin`ireo fifidianana nifanesy. Tsy mahagaga raha 30% sisa ireo tonga nifidy nandritra ny fifidianana farany teo satria maro ny zavatra tsy manjary. Tsy matoky intsony ny zavatra karakarain`ny fanjakana ny vahoaka. Aiza sy hatraiza ny ahafahan`ny fitondram-panjakana mametraka sy milalao ny vahoaka amin`ny alalan`ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ? Raha te hanaporofo ny fitondram-panjakana fa madio dia averina ny fifidianana. Aiza ho aiza ihany koa ny HCC manoloana ity tranga ity ? Nomena porofo maro napetrak`ireo mpitory ity andrim-panjakana ity saingy nilaza hatrany fa “azo raisina fa tsy mitombina”. Nanao antso avo ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena hoe mba jereo ihany izahay saingy tsy nisy noraisina ireo fitoriana ireo. Mbola sahin`ny HCC atao ve ny tsy hijery fotsiny io zavatra nambaran`ny CENI io ? Nisy ny heloka ka rehefa misy ny fandikan-dalàna dia misy fepetra raisina ao anatin`ny firenena. Misy lalàmpanorenana eto amin`ny firenena saingy manao izay danin`ny kibony fotsiny ny rehetra.